Khariidadaha Apple waxay ku darayaan xulashooyinka Gaadiidka Dadweynaha Florida | Waxaan ka socdaa mac
Sidii aan uga wada hadalnay maadaama hirgelinta adeegga Apple la hagaajiyay lana ballaariyay, Khariidadaha ayaa sii wadaya ballaadhinta fursadaha iyo tas-hiilaadka ay bixiyaan. Hadda, gaadiidka dadweynaha ayaa laga heli karaa Florida si loo ogaado waqtiga iyo safarka la qaadanayo si loo gaaro meel kasta.
Gaar ah, gobolka Florida ayaa lagu arkay horumar ka socda magaalada Tampa, halka hada laga bilaabo ay u oggolaan doonto in la ogaado barakaca loo baahan yahay iyadoo la adeegsanayo gaadiidka dadweynaha.
Tan macnaheedu waa adigahirgelinta buuxda ee wareegga guud ee bulshada ee magaalada, oo leh adeegyo ay ku jiraan taraamka Khadadka TECOsidoo kale Amtrak, Transit-ka Gobolka ee Hillsborough Area iyo pinellas Suncoast Transit Authority (PSTA).
Thanks to hirgelinta cusub, Dadka dagan Tampa iyo dalxiisayaashu waxay awoodi doonaan inay qorsheeyaan safarada iyo safarada iyagoo adeegsanaya jidadka khariidadaha Apple. Macluumaadka xilliyada bixitaanka iyo imaatinka, xulashooyinka kale ee gaadiidka, macluumaadka taraafikada ama dib u dhaca suuragalka ah ayaa ka mid ah xulashooyinka la heli karo.
Sidoo kale, Khariidadaha Apple waxay siinayaan metelaad dheeri ah oo 3D ah oo tareennada iyo saldhigyada basaska laga raaco, si loo fududeeyo isticmaalka loona ilaaliyo khaladaadka.
Iyadoo la hirgelinayo Transit, Khariidadaha Apple ayaa la wanaajiyey oo inyar inyar oo ka badan magaalooyinkuna ay ku darayaan xulashooyinkan. Waqtigaan la joogo, kaliya koox xul ah oo magaalooyin ku yaal Mareykanka ah ayaa lagu guuleystay inay hirgeliyaan tikniyoolajiyadan, sida New York, Los Angeles ama Phoenix.
Marka laga reebo Mareykanka iyo Shiinaha, Apple waxay xooga saareysaa dadaalada Boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska, Holland, Singapore, Australia iyo Japan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Khariidadaha Apple waxay ku daraan xulashooyinka gaadiidka dadweynaha ee Florida
Apple Waxay Heshaa "Pop Up Archive" Qalabka Podcast